Solila - Ikalamavony: Basy tsy ara-dalàna 34 isa naterin’ny olona an-tsitrapo amin’ny manampahefana
lundi, 11 mai 2020 20:46
Nahitam-bokatra ny fanentanana niarahan’ny Solombavambahoaka Raharimampionona nanatanteraka tamin'ny Fokonolona, Fokontany ary ny Kaominina Solila ny amin'ny tokony hamerenan'ireo mitazona basy tsy ara-dalàna ny basy eny aminy.
Tamin’ity Alatsinainy 11 May 2020 ity dia basy vita gasy miisa 31 sy basy maherivaika miisa 3 no naterin'ny Fokonolona avy ao amin'ny Fokontany Fihasinana, Kaominina Solila ao anatin'ny Disitrikan'i Ikalamavony. Natolotra ny lehiben'ny Zandary eto Ikalamavony ireo basy ireo.
Resy lahatra ny Vahoaka sy ny Fokonolona, hoy ny Solombavambahoaka Raharimampionona fa ilaina tanteraka ny fisian'ny fiarahamonina milamina tsy misy herisetra mba hahafahana miasa sy mamokatra am-pitoniana. Nisaotra ny mpitandro filaminana dia ny Zandary sy ny Tafika ny tenany amin'ny ezaka ataon'izy ireo hisian’ny fandriampahalemana maharitra amin’iny Distrikan’i Ikalamavony iny.